Kartepe Kocaeli Kart Sistemine Geçti – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara41 KocaeliKartepe wuxuu u wareegay Nidaamka Kaarka Kocaeli
29 / 11 / 2019 41 Kocaeli, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
kartepe wuxuu galay nidaamka kaararka weyn
Kartepe wuxuu u wareegay Nidaamka Kaarka Kocaeli; Gawaarida gaadiidka dadweynaha ee ka howl gala magaalada Kocaeli ayaa si tartiib tartiib ah u bilaabay inay u guuraan Nidaamka lacag ururinta elektiroonigga ah ee Dowlada Hoose ee Kocaeli (Kocaeli Card) tan iyo 2009. Ugu dambeyntiina, illaa bishii Diseembar 1 waxay bixisay bixitaanno raacitaan oo laga raaco degmada Kartepe.
Kala guurka nidaamka Kocaeli Card, lacagbixinta ayaa si tartiib tartiib ah looga saaray. Degmooyinka Izmit-Derince iyo gacanka cadmeed ee ku yaal adeegyada gaadiidka dadweynaha ee xeryaha ganacsiga ayaa horey looga saaray. Ugu dambeyntiina, 01 Ilaa Bishii Nofembar 2019, qaadista lacag-bixinta ayaa lagu joojiyay gaadiidkii dadweynaha ee degmooyinka Dilovası-Gebze-Çayırova iyo Darıca iyo aruurinta lacag ururinta elektiroonigga ah (Kaarka Kocaeli). 01 Diseembar 2019 Ilaa maanta oo Axadda, adeegyada duullimaadyada ee degmada Kartepe ayaa laga saari doonaa gaadiidka dadweynaha.
XILKA 1 TL
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli, Nidaamka Kaarka Kocaeli ka dib u guuritaanka gawaarida ayaa bilaabay in si tartiib tartiib ah looga saaro guddiga lacag-bixinta. 01 Diseembar 2019 wuxuu si buuxda uga shaqeyn doonaa Kartepe illaa iyo Axadda. 01 Diseembar 2019 Laga bilaabo Axadda, muwaadiniinta adeegsanaya gaadiidka dadweynaha ee gobolka Kartepe waxay isticmaali doonaan Kaarka Kocaeli marka ay fuulayaan gaadiidka dadweynaha. Ficil ahaan, muwaaddiniinta doonaya inay raacaan gawaarida gaadiidka dadweynaha oo leh lacag, khidmadda kaararka joogtada ah adoo bixinaya kaar dheeraad ah oo ah kaarka darawalnimada ee 1 TL ee gaariga ayaa ka faa'iideysan kara adeegyada gaadiidka dadweynaha.
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli iyada oo ku hadlaysa magaca muwaadiniinta in ayan la kulmin wax cabasho ah, ayaa uga digtay darawalada gobolka in ay ku wargaliyaan darawalada ayna caawiyaan muwaadiniinta. Intaas waxaa sii dheer, degmada magaalo weynaha waxay qaaday talaabooyinka lagama maarmaanka ah ee gobolka howl galaha wadaha nidaamka lacag ururinta elektiroonigga ah; Waxay kordhisay tirada iibgeynta waxayna kordhisay tirada aaladaha si otomaatig ah loo buuxiyo.
Magaalada caasimada ah, Kaarka EGO waa tagida elektaroonigga ah ee 'Smart Tarih'
Nidaamka Pooliga Dadweynaha ee Gaadiidka Dadweynaha wuxuu ka bilowdaa Kocaeli
Tilmaamaha Kaarka Magaalada ee laga helo magaalooyinka Kocaeli
Kaarka Gawaarida Magaalada Kocaeli ee Lacagta la dhimay…
17 Thousand 500 Ardayda Kaarka Magaalooyinka Magaalada Kanton City
Kaarka Kala Duwan ee Lagu Caawiyo Ardayda ka socota Magaalaweynta Kocaeli
Mashruuca Tareenka Iftiinka Korfez-Kartepe wuu caddaaday…
U beddel nidaamka musqusha ee tareenka TCDD
Ku-beddelashada Habka Sanduuqa Sanduuqa ee Basaska ee Şanlıurfa
Kuxigeenka Kocaeli Şeker: Wadada cusub…
Ergeyga Daabacaadda ee Ergan Mountain Range Generator ayaa la gadan doonaa
Gawaarida dadweynaha ee Kartepe
Nidaamka Kaarka Kocaeli